सत्तारुढ नेकपा र उसको अर्थराजनीति | चितवन पोष्ट
सत्तारुढ नेकपा र उसको अर्थराजनीति
वामपन्थी सरकारले वैकल्पिक आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन गर्न पहल गर्छ भन्ने आशा र विश्वास सर्वसाधारणले गुमाउन थालेका छन् । विगत एक वर्षदेखि सत्तारुढ रहेको नेकपाले वैकल्पिक आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबारे सर्वसाधारण जनतासम्म पनि पु¥याउन खोजेको देखिन्न र विगतको नवउदारवादी आर्थिक तथा सामाजिक परिपाटीलाई निरन्तरता दिन अभ्यस्त देखिन्छ । दुई तिहाइ मतको वामपन्थी सरकारको काम गराइप्रति उसकै नेता÷कार्यकर्तामा समेत सन्तुष्टि देखिँदैन ।
नेपालको वामपन्थी आन्दोलन न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालको अवस्थामा पुग्दै छ । वामपन्थी आन्दोलनले स्थापित गरेका हिजोका कतिपय मुद्दाले आज स्वयं वामपन्थीलाई नै जिस्काइरहेको आभास हुन्छ । झन्डै सत्तरी वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएर कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताको रक्षा गर्न लागिपरेका जनतालाई सत्तामा पुगेपछि के डेलिभरी दिने भन्नेबारेमा स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी नै अलमलमा परेको देखिन्छ । अब वामपन्थी अर्थराजनीतिको किटान नगरी सरकारले जतिसुकै गेयर चेन्ज गरे पनि समृद्धि हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । वामपन्थी सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत झन्डै चौध लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, सरकारले उल्टै तल्लो तहमा कार्यरत ३३ हजार करार कर्मचारीको रोजगारी खोस्ने निर्णय ग¥यो । जसले नियुक्ति दिएको भए पनि र जसको मतदाता भए पनि अपवादबाहेक ती नेकपाले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका मानिस हुन् ।
मुलुकभर ८० लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । देशमा रोजगारी नपाएर दैनिक झन्डै १५ सय मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यसरी रोजगारीमा गएकामध्ये दैनिक औसतमा तीन जनाको लास बाकसमा भित्रिन्छ । दैनिक बाकसमा भित्रिएका लाससँग थुप्रै मानिसको सपनामात्र टुक्रिँदैन, धेरैको बाँच्ने आधार पनि सकिन्छ । वर्तमान सरकारको अहिलेको गतिले वामपन्थी लक्ष्य हासिल गर्न भने निकै कठिन देखिन्छ । यसबाट पार पाउन सरकारले जतिसक्दो छिटो वामपन्थी आर्थिक नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्न जरूरी छ । समयले कसैलाई पनि पर्खंदैन, नेकपालाई पनि पर्खंदैन । आममानिसको आशा र भरोसामा जुन प्रकारको सद्भाव र उचाइ नेकपाको भागमा जनताले पारिदिएका थिए त्यो अपार र अथाह छ । नामअनुसारको काम नहुँदा वा अव्यवस्थित र जनमतको अवहेलना भइरहँदा असन्तोष र घृणा चुलिँदै जान्छ । पृथ्वीभित्र लाभा भरिएझैँ चरम निराशा र असन्तुष्टिमा रुपान्तरित हुँदै जान्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर : समस्या नभएर अवसर
डाक्टर, ड्राइभर र दशा
वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले वित्तीय चलखेललाई वामपन्थी आचरणअनुरुप नियमन गर्नसमेत हिच्किचाइरहेको मात्र होइन, वित्तीय चलखेलको एजेन्टको भूमिका निर्वाह गर्न लालायित भएझैँ देखिन्छ । यो प्रवृत्ति विकसित मुलुकहरुमा मात्रै होइन, नेपालजस्ता अतिकम विकसित वा विकासशील मुलकहरुमा पनि हुर्कंदो प्रवृत्ति हो । सार्वजनिक उद्योगहरु बन्द गरेर जमिन लिजमा दिनु, बुट व्यवस्थापनका नाममा ठूला–साना जलविद्युत् आयोजनाहरु, खानी, जंगल, रोडा, ढुंगा रोयाल्टी नामक कुतका लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पनु वा लिजमा उपलब्ध गराउनु कुत आर्जन गर्ने प्रवृत्ति हो । यी वस्तु तथा सेवा सस्तोमा लिजमा उपलब्ध गराएबापत् कमिसन नामक कुत नै पदाधिकारीहरुले असुली गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । त्यो राज्यको हकमा मात्रै सीमित छैन, त्यो उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, कृषक, म्यानपावर कम्पनी, शिक्षण पेसामा समेत हाबी हुँदै गएको प्रवृत्ति हो ।
दुई दशकदेखि बढिरहेको वैदेशिक रोजगारीका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्र मृतप्रायः छ । अहिले सहरमात्र हैन, ग्रामीण क्षेत्रको चरित्रसमेत उपभोगमुखी बनिसकेको छ । केही वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाले मात्र देशको कुल उत्पादनको ५६ प्रतिशत उपभोग गर्दथ्यो । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने नीति लिएको भएता पनि यो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा आयात ह्वात्तै बढेको छ । आयातको अनुपात यहीरुपमा बढिरहने हो भने गत वर्ष ११ खर्बको हाराहारीमा रहेको आयात यो आर्थिक वर्षमा बढेर १४ खर्बको हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । आयात र निर्यातको अनुपातको मेल हुन सक्ने कुनै सम्भावना क्षितिजमा देखा परेको छैन ।
अहिलेसम्मको नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य प्रवृत्ति भनेको देशको मेरूदण्डका रुपमा रहेका ऊर्जाशील युवा श्रमशक्तिको निर्यात गर्ने उनीहरुले पठाएको पैसाले सामान आयात गरेर उपभोग गर्ने नै छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म देशले फड्को मार्नेवाला छैन ।
नेपालमा सत्तारुढ पार्टीसँग आबद्ध नीति निर्माता हुन् या विपक्षमा उभिएका अर्थशास्त्री, नवउदारवादको विकल्प हुन्छ र खोज्नुपर्छ भन्ने चेतमा परिवर्तन आएको देखिन्न । वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक वित्तीय छेलोखेलोबेगर विकास हुन सम्भव छैन भन्ने नै उनीहरु हालसम्म पनि जिकिर गरिरहेका देखिन्छन् । पश्चिमा दक्षिणपन्थीहरुबाट यहाँका दक्षिणपन्थी तप्काले पनि केही सिकेको देखिन्न ।
संसारभरि सन् २००८÷०९ को अवधिमा नवउदारवादी पुँजीवादले नराम्ररी धक्का खाएपछि संसारभर फेरि पनि वैज्ञानिक समाजवाद कि पुरातन पुँजीवाद रोज्ने भन्ने बहस घनीभूत भइरहेको छ ।
यद्यपि, नवउदारवादी पुँजीवादी बजारमा फाइदा कमाएर पनि आफूलाई समाजवादी भन्न रूचाउनेले पुँजीवादी प्रजातन्त्रकै पैरवी गर्ने निजी पुँजी वा निजी सम्पत्तिको संरक्षणसहितको पुँजी कि राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद ? भन्ने प्रश्नमा रूमल्लिरहेका देखिन्छन् । निजी पुँजीमाथिको सम्बन्धको विषयमा चर्चा गर्दा स्थिर तथा चलायमान पुँजीको चरित्रलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि जमिनमाथिको स्वामित्व, उसले गर्ने उत्पादन र कायम गर्ने उत्पादन सम्बन्ध तथा आर्जन गर्ने कुत तथा पुनः उत्पादनका लागि कुतको पुनः लगानीको मात्रा एउटा आयाम हो, जुन समाजमा उपलब्ध एक विद्यमान चरित्रमध्येको एक हो । धनाढ्य मुलुकहरुमा यो भिन्न चरित्रको छ र हाम्रो जस्तो पिछडिएको उत्पादन पद्धति अझ सजिलो भाषामा खाइजीविकाका लागि आश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यो चरित्र अझै पनि सशक्त चरित्रमा विद्यमान छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि दशकौँअगाडि नै न्यायपूर्ण जमिनको पुनः वितरण गरिनु आवश्यक थियो । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि पर्याप्त मात्रामा राजकीय लगानी आवश्यक थियो । यस्तो लगानीले मात्र कृषिको आधुनिकीकरणसँगै औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक सञ्चित र श्रम उपलब्ध गराउन सम्भव हुन्थ्यो । बहुदलको आगमनपछि कृषि क्षेत्र झन् ओझलमा प¥यो । खण्डित जमिन, कम उत्पादकत्व र नीतिगत तथा संस्थागत उपाय या औजारको अभावमा कुल उत्पादनमा यसको योगदान प्रतिवर्ष एकातर्फ घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आश्रित परिवारजन र श्रमशक्तिको मात्रा भने ज्यूँ का त्यूँ रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रत्येक वर्ष धनी र गरिबबीचको खाडल डरलाग्दो बन्दै गइरहेको छ । स्थिर पुँजीको संरचनागत फेरबदल नगरी औद्योगिकीकरणको यज्ञ सम्पन्न गर्न सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि वर्तमान नेकपाको सरकार त्यो संरचनागत परिवर्तन गर्न उत्साहित देखिन्न । यस अर्थमा वर्तमान नेकपा आफ्नौ नामविपरीत कम्युनिस्ट हाइपोथेसिसभन्दा नवउदारवादी हाइपोथेसिससँग सहकार्य गर्न लालायित देखिन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
नेपालमा कृषिबाट अपेक्षित पुँजी सञ्चित नहुँदा विस्तारित वित्तीय पुँजी औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा सेवा र व्यापारमा लगानी विस्तार गर्न लालायित भयो, किनकि त्यही नाफा थियो । उदारीकरणको सबै ढोका खोल्दा पनि स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी नभित्रनुपछाडिको मूल कारण ‘नाफाको दर’ हो, जो सेवा र व्यापारभन्दा उत्पादनमा कम दरले भइरहेको छ । तर, वर्तमान नेकपा सरकार सबै कुरा योजनाबद्ध विकासको खाका कोरेर कतिपय ठाउँमा संरक्षण र कतिपय ठाउँमा खुलापनको समिश्रण गर्न चुकिरहेको देखिन्छ । कार्लमाक्र्सको विचारमा पुँजीवादी समाजको विस्तार हुँदा स्थिर पुँजीमाथि चलायमान पुँजीको प्रभुत्व वा प्रधानता सधैँ प्रभावशाली रहन्छ । कुन स्तरमा कस्तो खालको पुँजी मुलुकभित्र चलायमान भइरहेको छ, कुनचाहिँ मूल प्रवृत्ति हो भन्ने कुराले समाजको संरचना अर्धसामन्ती हो कि, पुँजीवादी हो कि, दलाल नोकरशाही हो कि, औद्योगिक हो कि या अल्पविकसित हो ? भन्ने छुट्याउन सकिन्छ ।
नवउदारवादी पुँजीवादले पुँजी निर्माण, सञ्चिति तथा एकीकरणमा सीमित व्यक्तिहरुको एकाधिकारको अवस्था सृजना गरिदियो । हिजोको एउटा औद्योगिक परिवार आज उद्योगपति पनि आफैँ छ, बैंकर्स, बिमापति, कुशल कृषक, एक्सपोर्ट–इम्पोर्टको व्यापारी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको एजेन्ट पनि आफैँ बन्न पुगेको छ । यो प्रवृत्ति जो हिजो देखिएको र भोगिएको पुँजीवादको स्वरुप र चरित्रभन्दा सर्वथा भिन्न प्रवृत्तिको छ । यसकै हातमा समग्र राजनीतिक अर्थतन्त्रको लगाम पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले समग्र उत्पादन पद्धतिमा, वितरणमा वा सामान्य मानिसको जीवन जिउने पद्धतिमा विगतमा भन्दा अझ बढी कष्टकर बनाइदिने गरेको छ । त्यही भएर संसारभर नयाँ खालको आन्दोलन, नयाँ प्रकारको वर्गसंघर्ष उठिरहेका छन् । नेपालमा पछिल्लो माओवादी जनयुद्ध तथा जनसंघर्ष यस्तै शोषण र उत्पीडनको विरोधमा भएको ठानिएको थियो र आजको नेकपाको सरकारले कम्तीमा पनि यस्ता नवसामन्ती वा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्ने छ भन्ने आशामै सर्वसाधारण मतदाताले उसलाई निर्वाचनमा सहयोग गरेका थिए । तर, बितेका एक वर्षमा यस दिशामा कुनै पनि नियमन र नियन्त्रणका लागि संस्थागत प्रयास गरेको देखिन्न ।
देशमा क्षेत्रीय विकासको असन्तुलनको अन्तर घट्ने न त कुनै संकेत छ, न त त्यसमा सरकारकै ठोस पहल नै देखिन्छ । उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषि र उद्योगको कुल उत्पादनमा योगदान निरन्तर घट्दो छ । देशको झन्डै ७२ प्रतिशत मानिस संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा केवल २७.६ प्रतिशत मात्र योगदान छ । जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान आव २०५७÷०५८ मा ९.३ प्रतिशत थियो, जब कि त्यसबेला देश गृहयुद्ध र चर्को लोडसेडिङमा थियो । यो आर्थिक वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भएता पनि विश्व बैंकले ६.३ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त लगानीको जरूरी हुन्छ । तर, सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालको कुल बचत कुल उत्पादनको केवल १५ प्रतिशत मात्र छ । यो भनेको कुल उत्पादन ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोडको १५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड ६० लाख हो । बचत भएको यो सानो रकम पनि पुनः लगानीमा सबै नै आउँदैन ।
सरकारले यसवर्ष मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेता पनि यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको मूल्य वृद्धिको दर हेर्दा आवको अन्तिमसम्म यो ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । वार्षिकरुपमा ४ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा आइरहेको युवालाई कसरी देशभित्र नै व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने सवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै अर्थ राख्दछ । एकातिर देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर यस्तो छ भने अर्र्कोितर नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । सोअनुरुपको कानुन पनि संघीय संसद्ले निर्माण गरिसकेको सन्दर्भमा वामपन्थी सरकारले जनताका मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? सवाल पेचिलो छ । हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालय अदक्ष र बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थोत्रा कारखानाका रुपमा स्थापित भइरहेका छन् । यति ठूलो लगानी गरेर नेपाल युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका लागि अदक्ष श्रमिक निःशुल्क उत्पादन गरिदिने कारखाना बनिरहेको छ ।
आधारभूत तहका मानिस र न्यून मध्यम वर्गका मानिसको स्वास्थ्यको पहुँच क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ । अबको वामपन्थी आन्दोलनको आर्थिक भाष्य के हुने भन्नेबारेमै नेपालका वामपन्थी अलमल परेजस्तो देखिन्छ । यो अलमलबाट यो सरकार जति छिटो बाहिर निस्कन्छ त्यति नै देश र नेकपालाई फाइदा हुनेछ । निश्चय नै यी समस्या वर्तमान सरकारले सिर्जना गरेका समस्या होइनन् । तर, अर्को सत्य के पनि हो भने वर्तमान वामपन्थी सरकारले यी समस्यामाथि विजय पाउँछ भनेर नै जनताले यो प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन् ।